Cunnada Faransiiska Lacagtan (Creme Chantilly) Qoraal
Dips & Spreads Cuntada Faransiiska Quraacda Faransiiska
Cunto Faransiis Faransiis ah (Crème Chantilly) Recipe
Qodobbo wanaagsan oo kareem ah ayaa muhiim u ah jikada Faransiis kasta. Kareemkan taajirsan ee loo yaqaan 'vanilla extract' ayaa ah hindisaha caadiga ah ee loo yaqaan 'keega' Faransiiska, keega génoise (keega suufka), iyo booyadaha.
Dabeecadda, dhammaantood waa kareem la qalajiyey oo la kariyay vanilla ah (qaar ka mid ah cuntooyinka waxay isticmaalaan liqueurs meel gawaarida ah-fiiri kala duwanaanta hoos). Waa xadhig si aad u ogaato sida aad u ogaato.
2 koob oo kareem culus (30 boqolkiiba dufanka caanaha)
2 qaado oo la kariyey sonkorta
1 qaaddo shaaha laga soo saaro tufaax wanaagsan
Warqad weyn oo isku dhafan, garaac kariimka culus, sonkorta, iyo basbaaska si wada jir ah ula wada xawaare sare ilaa foomka jilicsan ee jilicsan.
Isticmaal sida tooska ah ee qashinkaaga. Samee kareem kasta oo aan la isticmaalin.
Haddii aad jeceshahay kareem dufan leh , hadda waa wakhtigii aad soo jiidan lahayd dhammaan liisaska qurxinta ee aad heshay ee kirismaska. Qaar ka mid ah kuwa caanka ku ah inay isku daraan kiriimyada darayga ah waxaa ka mid ah amaretto, kassis, astaanta, curacao, Grand Marnier, cream Irish, rum, iyo wax kale.
U oggolow hal-abuurkaaga inuu hago.
Haddii aad tahay qadar-daweeye, isku day mid ka mid ah sharoobooyinka badan ee Talyaaniga ee loo isticmaalo cabitaannada qaxwada. Magacyada caanka ah waxaa ka mid ah Sonoma, Da Vinci, Torani, Giffard, Stasero, Fontana, iyo Monin.
Hal eray oo taxadar leh waa inaad si tartiib tartiib ah u bilawdo, laga yaabee 1 qaado oo ka mid ah sharoobada ama sharoobada aan qamriga lahayn ilaa wakhti ilaa aad gaadhay dhadhan aad doonayso.
Sidoo kale waxaad mooddaa sidaan
Cunnacmeedka Casriga ah ee macmacaanka macmacaanka leh : Macmacadani waxay ka kooban tahay macaan, macaan, marshmallows, jiir, lakabyo, iyo xayawaan la dubay.
Sida Loo Xoqdo Cuntada Dheecaanka ah : Waxaad sameyn kartaa kiriimkan kiriimka ah maalin kahor, sababtoo ah waxaa lagu sameeyaa jaleeco yar-yar oo aan lahayn wax gelatin oo qaabeynaya qaabkeeda oo aaney bilaabin kala qaybsanaan ama maqal.
Talyaani Mille-Feuille Cuntada lagu qurxiyo Cabbagilion Calaamadeynta Cream-ka : Cabbir , lakabyo jilicsan oo la isku qurxiyo oo la isku qurxiyo saliida zabaglione, mascarpone, cream cream, ama kareemka shukulaatada, ama isku dhafan. Zabaglione waxaa lagu sameeyaa jaallo yar iyo khamri Marsala ah, oo lagu qasi kariyo kareemo dufan leh, bilaabo bacrimin ah, buuxsantay.
Macmacaan Raspberry-Cream Roulade Cuntada : Tani waxay duuban duuban raspberry ah, oo sidoo kale loo yaqaano roulade ama roodel Swiss ah oo keega isbuunyo ah oo buuxiyey buuxinta qasacadaysan qasacadaysan, kareemka dufanka leh, jiiska kareemka iyo raspberries cusub.
Fatuurad la ruxay 55 g
Kolestarool 269 ​​mg
Carbohydrateska 19 g
Baked Pepperoni Pizza Dip Isbedelada
Shukulaatada Classic Chocolate Buche de Noel
Recipi Easy Madeleine - Classic Tea Cake Classic
Cuntada Faransiiska Gastrico Easy
Gaulettes Cunnayaasha Faransiiska ee Waffle Cookies
Kukiyada Caalamiga ah
Shaxanka Jamaanka ee Shaxda iyo Tarajiyada Balsamic
Samee Raaxadaada Lafahaaga leh
Japanese Curry Iyadoo Khudradda Khudaarta
Macmacaanka Cunnololeedka Cagaaran
Cunto khudradeed asal ah Miso Soup Recipe
Dhammaan Dandelions (Taraxacum Officinale)
Fiximaha Falafel-ga Guriga
Sida loo Cuno iyo Xulo Caanaha Dungeness
Doorashada & Kaydinta Kalluunka
Talooyin, Tilmaamo iyo Tababarka
Maaddooyinka Asaasiga ah
Cinnamon-Sugar Pecan Scones Recipe
Sidee loo sameeyaa Raajo Eyeball Diidan
Barxadda Cunto Hilibka lagu cuno